कोभिडका नौ नयाँ लक्षण कस्ता छन् ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperकोभिडका नौ नयाँ लक्षण कस्ता छन् ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
कोभिडका नौ नयाँ लक्षण कस्ता छन् ?
यूकेमा कोभिडका नौ नयाँ लक्षणहरू थपिएका छन् । यूकेको हेल्थ सेक्युरेटी एजेन्सीले हालै जारी गरेको निर्देशिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणमा घाँटी दुख्ने, जीउ दुख्ने र पखालासहित अन्य लक्षणहरू थपेको हो । महामारी सुरु भएको दुई वर्षपछि इङ्गल्यान्डमा निःशुल्क परीक्षण अन्त्य भएको केही दिनपछि नयाँ लक्षणहरू थपिएको हो । यद्यपि न्याश्नल हेल्थ सर्भिसेजले धेरै नयाँ लक्षणहरू रुघाखोकी र फ्लुका लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो रहेकोले होसियार रहन भनेको छ यसअघि कोभिड सङ्क्रमणमा निम्न लक्षणहरू देखिने मानिएको थियो ः
नयाँ तारन्तार खोकी
गन्ध वा स्वाद हराउने
महामारीको सुरुवातदेखि नै यी तीनलाई प्रमुख लक्षणहरू भनिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अमेरिकाले केही समय यता थप लक्षणहरू सहितको सूची प्रयोग गर्ने गरेको थियो । तर यूकेमा भने कोभिडका कुन–कुन लक्षणहरूलाई प्रमुख मान्ने र त्यसका आधारमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद रहेको थियो । टाउको दुख्ने कोभिडको लक्षण हो तर टाउको मात्रै दुखेको भरमा कसैले पनि कोभिडको परीक्षण गर्न नचाहने अवस्था हुँदा यस्ता लक्षणलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन ।
ज्वरो, खोकी र स्वाद वा गन्ध हराउने लक्षण चाहिँ अधिकांश सङ्क्रमणमा देखिने वा कोरोनाभाइरसकै कारणले मात्रै हुने हुँदा तिनलाई प्रमुख लक्षण मानिएको थियो ।
तर अब कोभिडका लक्षणमा यूकेमा निम्न नयाँ नौ लक्षण थपिएका छनः
सिँगान बग्ने वा नाक बन्द हुने
बिरामी महसुस हुने
यूकेमा हालसम्म ४९ लाख मानिसलाई कोभिड सङ्क्रमण भएको छ जुन प्रति १३ जनामा एक जना बराबर हो । इङ्गल्यान्डमा धेरैजसो मानिसका लागि निःशुल्क परीक्षण गत सातादेखि बन्द गरिएको छ । न्याश्नल हेल्थ सर्भिसेजे मानिसहरूलाई कोभिडका लक्षण र ज्वरो देखिए सकेसम्म घरमै बस्न र अन्य व्यक्तिबाट टाढै बस्न सुझाव दिएको छ । किङ्ग्स कलेज लन्डनका प्राध्यापक टीम स्पेटरले लामो समयदेखि धेरै कोभिड सङ्क्रमित मानिसहरूको लक्षणहरू अध्ययन गरेका र त्यसका आधारमा लक्षणको सूची बढाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए ।